တရုတ်နိုင်ငံမှ ၀ ယ်ထားသည့်ဝက်သည်ထိန်းသိမ်းထားသည့်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ Huikang
Braised ဝက်သားသည်လူသိများသောလူကြိုက်များသောဟင်းပွဲဖြစ်ပြီးအဓိကအစားအစာတစ်ခုစီတွင်ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင် braised ဝက်သားရှိသည်။ ၎င်းသည်ဝက်သားဝမ်းကိုအဓိကပါဝင်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်၊ အဆီနှင့်ပါးလွှာသောသုံးလွှာအလွှာ (ဝက်သားဝမ်း) ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးပြုသည်။ အိုးသည်အဓိကအားဖြင့် casserole ဖြစ်သည်။ အသားများသည်အဆီနည်းပြီးပါးလွှာသည်၊ ချိုမြိန်။ ပျော့ပျောင်းသည်၊ အဟာရပြည့်ဝပြီးပါးစပ်၌အရည်ပျော်သည်။
အညိုရောင်ငံပြာရည်ထဲမှာအပေါက်ဝက်သားကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်အနှံ့ပြန့်နှံ့နေသည်။ အချို့သောအာဟာရတန်ဖိုးရှိသည့်နည်းလမ်း ၂၀ မှ ၃၀ အထိရှိသည်။
ပါဝင်ပစ္စည်းများ: ဝက်သားဝမ်း, ပဲပိစပ်, ကြယ်ပွင့် anise, ဂျင်း, ငရုတ်ကောင်း, လျှော်ရေနံ, ကျောက်သကြား, ကြက်သွန်ဖြူ, ဆား
1. ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုပြင်ဆင်, ဝက်သားဝမ်းကိုဆေးကြောပြီးလျှင်နှင့် Mahjong အပိုင်းပိုင်းခုတ်ဖြတ်;
၂။ နှမ်းဆီ၊ sautéဂျင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်ကောင်း၊
3. ၀ က်သားကိုဗိုက်ထဲထည့်ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးအနည်းငယ်မီးမွှေးမှီတိုင်အောင်စပျစ်ရည်သို့မဟုတ်ဝိုင်ဖြူ၊ soy sauce၊ rock သကြားများထည့်ပါ။
၄။ သင့်တော်သောရေပွက်ပွက်ဆူနေသောအိုးထည်အိုးတစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့ပြီးနှေးနှေးသောနာရီတွင်တစ်နာရီမျှမျှမျှထားပါ။ တစ်ဖက်တွင်ပုလင်းထဲသို့ဝက်အရေပြားကပ်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်၊ တစ်ဖက်တွင်အိုးကိုအညီအမျှအရောင်ပေးရန်မကြာခဏလွှဲပြောင်းရန်လိုအပ်သည်။ အမှုမထမ်းခင်ငရုတ်ကောင်းနှင့်ဆားအချို့ဖြန်းပါ။
၅။ အဲဒါကိုထုတ်ပြီးစနစ်တကျသတ်မှတ်ထားပါ၊ အစာစားချင်စိတ်ကပိုကောင်းလိမ့်မည်။
၁။ အရေပြားပေါ်ရှိဝက်သားဝမ်းကိုစတုရန်းအပိုင်းပိုင်း ခွဲ၍ ကြက်သွန်နီနှင့်ဂျင်းတို့ကိုအချပ်ကြီးများခွဲပါ။
၂။ အိုးထဲသို့ဆီထည့်ပါ၊ သကြားဖြူထည့်ပြီးကြော်ပါ။ သကြားအရောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲသောအခါအမဲသားကိုထည့်ပါ၊ သင့်တော်သောရေပမာဏထည့်ပါ။ ပဲပိစပ်၊ ဆား၊ သကြား၊ ကြက်သွန်အစိမ်း၊ ဂျင်း၊ ကြယ်ပွင့်၊ ၁.၅ နာရီအတွင်းသိမ်းဆည်းပါ။